News - Obi ụtọ na-eme ememe DTS Nestlé Turkey oru ngo gafere ọma Nestlé si okpomọkụ Nkesa Testing
Obi ụtọ na-eme DTS Nestlé Turkey oru ngo gafere ọma Nestlé si okpomọkụ Nkesa Testing
Shandong Dingtaisheng Machinery Technology Co., Ltd., dị ka onye ndu na nri ụlọ na ihe ọ beụ beụ ihe ọverageụverageụ ụlọ, mere ọganihu na-aga n'ihu na ihe ọhụrụ na ụzọ na-aga n'ihu, ma merie otu nkwenye na ntụkwasị obi nke ndị ahịa n'ụlọ na mba ofesi.
Okwesiri ikwuputa na otutu oru ngo nke afọ a DTS meriri oru kọfị dị njikere nke ụlọ ọrụ Nestlé Turkey OEM, na-eweta akụrụngwa zuru ezu maka mmiri ịgba agba mmiri ọgwụ na-agba mmiri, yana ịwụnye igwe juputara na GEA na Italy na N'oge a, site na mmepụta na nhazi, na abụba, maka ntinye na inye ọrụ n'otu oge; "nwee ikike siri ike", ndị otu DTS siri ike chọrọ maka akụrụngwa akụrụngwa, usoro siri ike na nke ọma, meriri ndị ahịa ikpeazụ, United States Otuto nke ndị ọkachamara Nestlé na ndị ọrụ ntinye aka na ndịda South America. Mgbe ihe karịrị ụbọchị iri nke mmekọrịta imekọ ihe ọnụ, nkesa ọkụ nke DTS sterilizer na steeti na-agbagharị agbagọ zuru oke, ma gafere nke ọma na nyocha nke nrụgide nke Nestlé.
Kedu ihe nkwenye ọkụ ahụ? Kedu ihe kpatara nkwenye ọkụ ji jiri kpọrọ ihe nke ndị ahịa dị elu? Kedu uru ndị DTS ga-eru iru eru maka ọrụ a?
Nkwenye nke ọkụ, ya bụ, mgbe ị na-eme ọgwụgwọ ọkụ na ngwaahịa ahụ, chọpụta na ọnọdụ okpomọkụ nke akụkụ ọ bụla nke akụrụngwa ọgwụgwọ thermal bụ nke edo edo ma na-agbanwe agbanwe n'oge usoro ọgbụgba oge mgbe niile, wee chọpụta ma usoro ọgbụgba ahụ nwere ike nweta nchekwa nri, si otú a optimizing usoro iji melite ogo ngwaahịa ma belata usoro oge. N'ime ihe ọ filledụveraụ na-aba n'anya, naanị nsị kwesịrị ekwesị ma dị irè nwere ike ibibi ma ọ bụ gbuo enzymes na microorganisms na ihe ọverageụ itselfụ n'onwe ya, ma hụ na ngwaahịa ndị ahụ na-egbo mkpa ịzụ ahịa azụmahịa. Yabụ, nkwenye ọkụ bụ otu n'ime ihe ndị bụ isi iji hụ na nchekwa ngwaahịa, ọ bụkwa otu n'ime ihe dị mkpa US FDA maka ndị na-emepụta nri na ihe ọ beụ beụ. Agbanyeghị, enweghị usoro edo edo edobere maka ule nkwenye ọkụ nke akụrụngwa nsị ọkụ n'ụlọ na mba ofesi, mana ihe Nestlé chọrọ siri ike. Naanị ndị na-emepụta akụrụngwa nwere ezigbo mma, arụmọrụ a pụrụ ịdabere na ya na sistemu ụda nwere ike ịgụnye na listi ndị na-eweta ha. Nke a bụkwa ihe ndabere maka DTS iji lanarị, mepee ma nwee ọganihu.
DTS nwere ọkachamara, ndị na-eto eto na ndị siri ike R & D, "njedebe dị elu, nkenke, ihe kachasị elu" ngwa nhazi, na-achọ mgbanwe na nyocha, na-agbanwe agbanwe na mgbanwe. Ekwenyere m na DTS ga-aga n'ihu ma dị anya ma mepụta ndụ ka mma.